कथा : अपराधी मनोभाव | Ratopati
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसार ३, २०७४ chat_bubble_outline1
शिक्षा, मेरी छोरीको ट्युसन मास्टर, मेरो अफिसको सहकर्मी अहिले मेरो छोरीलाई पढाउँदै छे । म पत्रिका पढेको बाहनामा उनीहरुलाई चिहाइरहेछु । आजकल मेरो सोचाइलाई मैले नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन । जब शिक्षालाई देख्छु, मलाई कता कता उसलाई छुने भाव जागेर आउँछ । मैले आफूलाई मनोरोगी भनेर पोल लगाएँ । त्यो शिक्षाभन्दा तेरी बूढी धेरै राम्री छे भनेर सम्झाएँ । तर पनि मबाट उसलाई छुने चाहना हटाउन सकेको छैन । आज पनि शिक्षाले फ्रक लगाएकी छे । आजकल त यसलाई वान पिस भन्छन क्यारे । उसको गहुगोरो तिघ्रा, सेतो यो फ्रक वास्तवमै राम्रो देखिएको छ । घुँडासम्म आएको फ्रकलाई अझ लामो बनाउन सकिन्छ जसरी ऊ तानिरहन्छे । यति अप्ठ्यारो लाग्ने भए सुरुवाल लगाउनु नि । म मनमनै टिप्पणी गर्छु । उफ ! निहुँरिदा उसको फ्रक त सरेर छातीको आधा भाग पो देखिरहेको छ । सरेको फ्रक देब्रे हातले माथि सार्छे र दाइने हात कापीमा दगुराउँछे । उसको यो क्रम दोहोरिरहन्छ । कस्तो कपडा लगाएकी हो ? मलाई उदेक लागेर आउँछ । तर बेला बेला ऊ निहुरिँदा चियाउन भुल्दिनँ । “आज बिदाको दिन कति पत्रिका मात्र हेरेर बसेको बाहिरतिर निस्किए हुन्छ नि” मेरो क्रमलाई भङ्ग गर्न श्रीमती आइपुग्छे । बिना प्रतिवाद म बाहिर निस्कन्छु ।
घर आइपुग्नासाथ श्रीमतीले उर्दी लगाउछे । “शिक्षा मिसलाई पुर्याइदिनु पर्यो रे । अर्को ठाउँमा पनि ट्युसन पढाउनु छ रे ।” म हेल्मेट लिएर बाइक स्टार्ट गर्छु । ऊ छोरीलाई बाइबाई गरी फ्रक समात्दै बाइकमा बस्छे । अलि लामो कपडा लगाउँदा पनि राम्रै देखिन्छ होला नि । म खरो भाषामा सुझाव दिन्छु । मैले दिएको यो सुझाव आफुलाई बचाउन हो या उसलाई बचाउन हो, म दोधारमा छु । उसबाट कुनै प्रतिउत्तर आउदैन । अनुत्तरित उसको मौनताले मलाई जङ्ग चलाउछ । त्यसैले आफ्नो मनोबादमा सामेल भई दुखेसो पोख्छु, म पैत्तिस वर्षको पुरुषले २२ वर्षकी केटीलाई सुझाव दिन मिल्दैन र ? ऊ चाहिँ मेरो सोचाइलाई भंङ्ग गर्दै अर्को ठाउँमा पुग्न अबेला भएको जानकारी दिन्छे ।
“अमर सर, मैले विधार्थीलाई दिन राखेको प्रश्न पत्र भुलेँछु । कोठामा पुर्याइदिनुहुन्छ ?” म मिनेट पनि नलगाई उसलाई बाइकमा राखेर लिएर जान्छु । तपाईंले चाडो ल्याउनु भएछ । चिया खानुहुन्छ ? म खानेमा इसारा जनाउछु । मेरो हर्कत र सोचाइले मलाई अपराधी बनाउन खोज्दैछन् । त्यसैले म मनमनै शिक्षालाई गाली गर्छु, “एक्लै बस्ने भएपछि किन अरु ल्याउनु पर्ने ?” आफ्नो अपराधको मनोभावबाट बच्न उसलाई हतार भएको जनाउछु । ऊ बेमतलबका साथ चिया पकाउन तल्लिन छे । म आफूले आफैलाई सम्झाउदै भन्छु– उ मेरो आफ्नो बहिनी जस्तै हो, छोरी जस्तै हो । तर जब मेरा आँखा उसका यौवन मस्त शरीरमा पर्छ । तब छोरी, बहिनी भन्ने भाव बिलय हुन्छ । त्यतिबेला म आफूलाई केवल एक पुरुषको रुपमा पाउँछु । आफ्ना दूषित भावनाबाट भाग्न बाहिर निस्कन्छु । “सर चिया”, शिक्षा चिया लिएर आउँछे । भनिन्छ मान्छे आफूले चाहेको पुर्याएर छाड्छ । चिया लिन लाग्दा अनायासै मेरो हात उसको छातीमा ठोक्किन्छ । म अतालिँदै सरी भन्छु । ऊ मुस्काएर इट्स ओके भन्छे ।
मलाई उसको मुस्कानसहितको इट्स ओके भन्ने शब्दले तीन दिनदेखि घुमाएको छ । के उसले ठीक छ, छुन पाइन्छ भनेकी हो ? कि अरु केही हो ? अर्थ जे भए पनि उसबाट पर भाग्ने निर्क्यौल गर्छु । तर घर पुग्नासाथ श्रीमती उसैगरी शिक्षा मिसलाई पुर्याइदिन पर्यो भन्छे । एक मन त लाग्छ नमानु । फेरि जाने निर्णय गर्छु । आज पनि ऊ उसै गरेर चिया खान आग्रह गर्छे । मन नमान्दा नमान्दै पनि चिया खान राजी हुन्छु । अस्तिको इट्स ओकेको निक्र्यौल निकाल्न झुक्किएको भान पार्दै उसको छातीमा हात पुर्याउछु र उसको भाव नियाल्छु । सशङ्कित उसका आँखा मेरा आँखासँग ठक्कर खान्छन् । केही नभएको भान पार्दै पर भाग्छन् । अनि म बबुरो निष्कर्ष निकाल्छु । उसको इट्स ओके मिन्स यस यु क्यान टच मी हो ।
आज शिक्षा कोठा जाने प्रस्ताव राख्छे । मेरो मुटु ढुक्क भुल्छ । म पत्याउनै सक्दिन । म खुशी हँुदै उसको पछि लाग्छु । आज वास्तवमा नै मेरो सोच मबाट अनियन्त्रण भई छाड्छ । धेरै दिनको इच्छा पूरा गर्ने आजको दिन ठहर्दै म शिक्षालाई ग्वार्लम्म अँगालो हाल्छु । अपसोच म डङरङ्ग लड्न पुग्छु । के भयो भनेर सोच्न नपाउँदै शिक्षा चक्कु बोकेर आउँछे । म भाग्न खोच्छु तर मेरा खुट्टा लरबरिन्छ । म उठ्न नसकी त्यही पल्टिरहन्छु । ऊ चाहि चक्कु मेरो आँखातिर देखाउँदै भन्छे– मलाई हेर्ने गिद्ध आँखा यही होइन । म तेरो आँखा निकाल्छु र कहिले देख्न नसक्ने बनाउँछु । मेरो आँखा निकालुला जसरी चक्कु घुमाउँछे । उसको आँखाको रिस, रुप, र हाउभाउ हेर्दा लाग्छ मैले सानामा सुनेको देवी उही हो । म डरले बोल्न सक्दिन । शिथिल र काँपिरहेको शरीर भाग्न आँट गर्दैन तर दिमाग भाग्न साथ मागिरहन्छ । ऊ मेरो हात तान्दै भन्छे– मेरो जिउमा मनोमानी तरिकाले छुने हात यही होइन । म यसलाई टुक्रा टुक्का पार्छु र कहिले छुन नसक्ने बनाउँछु । ऊ बोल्दै जान्छे । तैले मलाई ‘शिरिषको फूलको’ सकम्बरी सोचिस । जसलाई छुदैमा ओइलाएर जाने । सत्य बरु तलाई मारेर अपराधी बन्छु तर तेरो अनि पुरुष जातिको बैमानी सहदिन । धरोधर्म म सकम्बरी बन्दिन । ऊ के भन्छे म बुझ्दिन । एकछिन कराएपछि उ रुँदै भुइँमा बस्छे । अघिदेखि ढोका ताकिरहेको म बल्ल उठेर भाग्ने साहस आउँछ । हेल्मेट छुटेछ तर फर्किने आँट आउदैन ।
कालीको स्वरूप शिक्षाको आकृतिले तीन दिनदेखि मेरो निद्रा हराएको छ । अनि दुई दिनदेखि ऊ गायब छे । अफिस, ट्युसन ऊ कतै देखा परेकी छैन । आज त साथीहरुले उसको कोठासमेत हेरेर आएछन् । उसले कोठा छोडी रे । घरमा श्रीमती र छोरी पनि उसको खोजी गर्दैछन । मलाई भने उसको अनुस्पथितिले सान्त्वना दिएको छ । र त मनमनै कामना गर्दै छु । ऊ नफर्कोस कहिले नफर्कोस । तैपनि एकमन उसले केही गर्ने त होइन भन्ने कुराले झस्काइरहन्छ । के यसमा गल्ति मेरो मात्र छ ? उसको गल्ती छैन र ? मैले उसलाई त्यसरी छुँदा राम्रो लाग्दैन भनेको भए हुन्थ्यो । उसले मलाई सुरुमै अस्तिको रुप देखाएकी भए सत्य म उसलाई छुन त के नजिक जाने आँटसमेत गर्दैन्थे । ऊ किन मौन बसी ? उसको व्यहोरा प्रति दिक्दारी लाग्छ । हुन त मैले उसलाई छोएको राम्रो लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा नपाएको होइन । मनको अभिव्यक्ति बोली मात्र होइन, मैले नबुझेको होइन । मैले प्रत्येक पटक छुँदा उसको बिग्रिएको अनुहार ननियालेको होइन । मबाट ऊ टाढा भाग्दै गएको कुरा पनि चाल नपाएको होइन । तर पनि उसको मौनता मेरो साहस बन्यो । उसको मनौता मेरो कौतुहलताको शिकार बन्यो । जसले गर्दा हामी दुवैले अपराधी मनोभाव पालिरह्यौ ।
बिहान छोरी चिच्याएको आवाजले मेरो निन्द्रा भङ्ग हुन्छ । म दौडँदै छोरीतिर जान्छु । उसै गरेर श्रीमती पनि आइपुग्छे । “के भयो ?” हामी एकसाथ सोध्न पुग्छौँ । पत्रिकातिर देखाउँदै भन्छे– शिक्षा मिस ! मैले हेर्न नपाउँदै श्रीमतीले पत्रिका लिन्छे र पढ्छे । ‘यौन दुव्र्यवहार बारे महिला अधिकार कर्मीसँग अन्तर्वार्ता’ । म विश्वास गर्न सक्दिनँ । श्रीमती अन्तर्वार्ता पढ्न थाल्छे । मलाई भनन्न रिँगटा छुट्छ । म उसले पढेको केही केही मात्र सुन्छु । पहिले मैले पनि यौन दुव्र्यवहार भोग्नु परेको थियो । सुरुसुरुमा मेरो जिउमा हात आइपुग्दा लाग्थ्यो सायद झुक्किएको होला भन्ठानेर मैले वास्ता गरिन । पटक पटक दोहोरिन थाले पछि मैले चाल पाएँ कि उसले नियतवस गरिरहेछ । तर ममा खुलेर बोल्ने आँट थिएन । त्येसैले म ऊबाट टाढा भाग्दै जान्थेँ । जति म टाढा भाग्थे उति ऊ बहाना बस मेरो नजिक आइपुग्थ्यो । मैले त्यो मान्छेलाई यति घृणा गर्न थालेँ कि उसलाई भेट्न साथ मलाई घाइते बनाऊ जस्तै लाथ्यो । यौन दुव्र्यवहार बारे हामी सबै जना बोल्न पर्छ । यस सम्बन्धी ज्ञान बच्चादेखि सबै उमेरको हुनुपर्छ । आफूलाई पर्दा बोल्न सक्नुपर्छ । नत्र यसबाट अपराधी जन्मिन सक्छ ।
Jan. 21, 2018, 3:33 p.m. samjhana
malai yo katha sahi lagyo . samaya anusarkoa yasta katha pathak majh pugnu jaruri chha. janachgetanako kami ta chadsai chha tyo bhanda pani bujruk haruko sankhya badhi xa. harek kishwari yo samasyaabata gujriraheka chhan. malai yo katha man paro ajha gahiriyos...